MM Abiyyi Ahimad fi hojjetattoonni isaanii hedduun dhibee korotaatin qabamanii – Kichuu
HomeMM Abiyyi Ahimad fi hojjetattoonni isaanii hedduun dhibee korotaatin qabamanii
MM Abiyyi Ahimad fi hojjetattoonni isaanii hedduun dhibee korotaatin qabamanii
MM Abiyyi Ahimad fi hojjetattoonni isaanii hedduun dhibee korotaatin qabamanii yaalarra jiraachuu isaanii FSM madda amanamarraa mirkaneeffateeraa.
Dhibeen kun MM Abiyyi Ahimaditti akka malee hammaatee guyyaa sadiif “Ventilator” irra kan turan yoo tahu yeroo ammaa garuu haala gaarii irra jiru jedhameera. Torbee tokko dura FSM, madda amanamaa irra argateen MM doktaroota alarraa dhufaniin yaalamaa jiraachuu gabaasee ture.
Hojjettoota waajjira MM keessaa kan dhibeen kun itti hammaate kan biroon Aadddee Dammituu Hambisaa maatii isaanii waliin yeroo ammaa Hospitaala tokkotti gargaarsa hatattamaa argachaa akka jiranis beekameera.
Daniel Kibraat fi namoonni hedduun waajjirichaa dhibee kanaan qabamuun kan mirkanaa’e yoo tahu baayyeen isaanii mallattoo dhibichaa kan hin agarsiisne fi mana tahanii hojjetaa akka jiranis mirkaneessineerra. MM Abiyyi Ahimad yeroo dheeraaf ummatatti otoo hin mul’atin turuun isaanii shakki adda addaa ummata biratti uumaa akka jiru ni beekama.
Waltajjii Shimallis geggeessaa oolee alaabaa Minilik fayyaame akkasitti dargaggoota ijaaru
Matakkal Aanaa Dibaaxeetti Special komaando 65n mootummaan erge keessaa..